बर्दिवास, ६ चैत । महोत्तरीसहितका मिथिला क्षेत्रमा रङ, अबिर र उमङ्गको पर्व होली (फागु) को रौनक हराउँदै गएको छ । पर्वको मुख्य आकर्षण जोगिरा गीत बज्न छाडेपछि होली आए÷नआएको पत्तै पाइन छाडेको यहाँका बूढापाकाले बताएका हुन् ।
कस्ता मानिसले राख्छन् जनावरसँग शारिरक सम्बन्ध ? सार्बजनिक भयो यस्तो रोचक तथ्य !
गोल्डेन बुटमा एमबाप्पेले दिए मेसीलाई टक्कर !